November 26, 2020 Farah Abdulkadir Mohamed 9
MUQDISHO(P-TIMES) – Qaar kamid ah Musharaxiinta u taagan Madaxweyne-nimada Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa maanta soo gaba-gabeeyey waxayna soo saareen Warsaxaafadeed ku wajahan arrimaha ay tabashooyinka muujinayaan oo ay ka mid yihiin qodobo dhammaan saameyn ku yeelanaya arrimaha doorashooyinka.
Musharaxiinata ayaa soo jeediyey qodobada kala ah.
1-In la kala diro dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer Federaal iyo Dowlad Goboleedba, guddiyadana lagu soo magacaabo wadatashi iyo wadarogol dhinacyada ay qusayso maamulka doorashada ee kala ah Dowladda Federaalka ah, dowlad goboleedyada iyo Golaha Midowga Murashaxiinta, maadaama aan magacaabistooda la waafajin shuruudihii iyo .
2- In Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi, haatanna ka mid ah hoggaanka ugu sarreeya ee dalka isla markaasna ka soo jeeda Gobollada Waqooyi uu sharciyad buuxda u haysto in uu magacaabo xubnaha gobolladaasi ku
metelaya Guddiyada Doorashada iyo Xallinta Khilaafaadka ee labada Heer ee Federaal Wuxuu kaloo Goluhu dalbanayaa in doorashada xubnaha Baarlamaanka ee ka soo jeeda Somaliland lagu qabto Teendhada Ciidamada Cirka ee Afisyoone, iyadoo ay goobjoog ahaanayaan wakiillo ka socda Murashaxiinta, beesha caalamka, Booliska Soomaaliyeed iyo kan AMISOM.
3- In magacaabista xubnaha beelaha Banaadiriga ah ku metelaya guddiyada doorashada loo madax banneeyo odoyaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelahaas, doorashadoodana lagu qabto Afisyoone, goobjoogna ka ahaadaan wakiillo ka socda Murashaxiinta, beesha caalamka, booliska Soomaaliyeed iyo kan AMISOM.
4- In xulista ergada ay iska kaashadaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee beesha kursiga iska leh, dowrka Dawlad Goboleedyadana ku ekaado diiwaan gelinta sida uu dhigayo heshiiskii siyaasadeed ee Golaha Wadatashiga Qaranka ee uu Baarlamaanku wax ka bedelista ku sameeyey.
5- In Dowladda Federaalka ah ay si deg deg ah ugala soo laabato maamulka sharci darida iyo ciidamada ay geysay Gobolka Gedo, si loo ilaayo midnimada Dowlad Goboleedka Jubbaland, maamulkana dib ula wareego deegaanka, si ay ugu suuragasho qabashada doorashada xubnaha Baarlamaanka Federaalka ah ee deegaankaas sida ku xusan heshiiska doorashooyinka.
6- In madaxda dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya aysan guda gelin qabashada doorasho aan la isku waafaqsaneyn iyo in ay masaafo isku mid ah u jirsadaan murashaxiinta, taageeradoodana aysan ku gaar yeelin murashax gooni ah.
7- In loo hawlgalo xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% ah.
8- In la helo korjoogto ka socota ururrada bulshada rayidka ah, ururrada qareennada, xubno ka socda Golaha Murashaxiinta iyo wakiillada beesha Caalamka si loo xaqiijiyo hufnaanta doorashooyinka.
9- In Guddoonka iyo xubnaha Labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya (BFS) ay qaataan kaalintooda ku aaddan ilaalinta ku dhaqanka Dastuurka KMG ah iyo dhammaan shuruucda kale ee dalka gaar ahaan qodobbada khuseeya arrimaha doorashooyinka qaranka.
Bacaac bucuuc biciic gux gux gux gux gux,
Hawareegto giraanta maryooley caqli xun.
Shir war murtiyeed shir warmutiyeed horta waraaqahan faraha badan ee layska qorayo waxa ka horeysa horta yaa adeecaya ama ku dhaqmaya, ilaa shaarubo weyne Timo beerte Armaajo ayaa waxan iyo wax lamida soo saara laakiin halkaa lagama qaado iska daa in lagu dhaqmo.
Walee maryooley baan dhinacna u dhaqaaqin hayska daba meeraysato ilaa qiyaamaha
Waxaan maqli jiray 5ta maamul goboleed iyo Gobolka Banaadir, hadda waxaay reer Muqdisho magacyadii faraha badnaa ku soo dareen.
In aay si siman u wada hawlgalaan, Dowlada federalka, Dowlad Goboleedka Iyo Magaca cusub ee ah, “Golaha Midoowga Musharixiinta” kkkkk
Waxaan xasuustay, Golihii Midoowga Maxaakiimta ee dhammaantood ka koobnaa, Beesha Hawiye ee loo ekeeysiinayey wax Soomaali ka dhexeeya!!kkkkk
Mar waa wada Madluun oo xaq baa laga Maroorsadaye!
Marna waa Mashaa’iikh iyo Sheekh diintu Meeriniye!
Marna waa Mariid iyo Mas iyo tuug ku Mirayaaye!
Wallee Midabbo badanow anaan Muxubbo kuu haayne!
Muqdisho anigaan u socon Minanka Ceelgaabe!
Muddollood anuusan ii Maldihin Midibbadiisiiye!
Murunsade anaan Magan u noqon oon Muteeysanine!
Madarkicis anuusan Madax i jebin Maagna ii diline!
Kkkkkk farmaajo godkiisii ayaa biyo ugu soogaleen shaatigii uu toshay ee uu sida fiican isula ekeeysiiyey waa laga jeexjeexay kkkkkkkkk tolow muxuu samayn doonaa? Farmaajo ninkii uu isku hallaynayey ee ABIY ahaa isagaa tiisa u yaabban oo tigree ayee baallaha ka riftay, aqli haddii uu Leeyahay farmaajo ha iska cararo oo nimankaan hawiye dhulkooda ha uga tago, wuu maqlaa sida ay u dhaaranayaa, marreexaan awalba waxbo kuma sookordhinayn dalkaan canshuur ma bixiyaan marreexaanku laakiin waxay rabaan ineey ku dulnool aadan dadkale, kismaayo waxay ugu ordayaan waxay rabaan wax aysan shaqaysan ineey iska cunaan kkkkkk waa lagu fahmay marreexaan.middaas, hawiye waa diiday in xoolihiisa hotoolo lagu cuno oo lagu raaxaystto, farmaajo ha is-raaceen reerkiisa garbahaarreey iyo caabudwaaq ha aadan quudintooda waa ku daalnay Hanna dhaafaan
Nin daad qaadey xunbo cuskay. Arinta ay nimankani goor ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen ka hadlayaan cidi dheg jalaq u siinmeyso. Kolkaas waa ama iney ka dhabeeyaan in Farmaajo ay Muqdisho ka eryaan oo fowdo dhacdo ama iney iska aamusaa oo iyagoo soo jeeda kaadhka doorashada laga marsado. Dabadeed ay Afarsanoo kale gunuunucaan amaba iyagana inta la wada laayo xitaa kabahooda lagu aaso.
Anigu sidaan is leeyahay waxey ku danbeyn iyagoo la jiidhsiiyo oo gacmo madhan isku xoqaya ay mid mid Muuqdisho dhuumaaleysi uga baxaan.
Somali maxamadeey waanii salaamay waxaan salaamaayane afartaas qof oo Commentiga soo qortayne kuma jiraan ee Somaalida kale ayaa niiga badan adeeryaal is dajiya√√√ tan xigto waxaan leeyhy dadka Comnentiga kasoo bixiyo Webkan Somali ma ahan miyaa dadkaan ma tigreebaa, war wuxu wax aan wadan waxba ka ogeyn oo afaara qabiileystayaal ah oo bisinka lagu dhalin yaaahuuu√√√ war wuxuuu waa duwaag quban oo Phone loo dhiibay
Waan kusalaamay sxb. Meesha filin hore oo lagu soo celceliyo ayaynu ku daawaneynaa.
Afartii sanoba kooxbaa kuraasida gadata. Dabadeedna waxey dhiigmiirato ku noqdaan kuwa kursiga kaabaha u wada ah jeceylka u qaada. Kaasna wuxuu jaqaa masaakiintaas Soomaaliyeed ee jeelkaas dusha ka furan ugu xareysan. Kkk
Dabadeedna wuxuu isku dayaa inuu tubadaas isku talaalo. Wuxuu is le’ekeysii is yidhaa Kursigii one size sits them all ka ahaa. Kkkk
Inta kalena sidaas iyo si le’eg. Is xagxagasho, buuq badan iyo badhadhaq. Xoog iyo xeeladba karkaarka ayaa la’is weydaariyaa.
Doorkan’se meesha waxaa ku fadhiya, kuwii ama ku dul bakhtiyi jirey ama lugta inta la qabto laga soo fujin jirey. Saanse uma maleynayo yeydan ka daba yuu yuu lihi, waa bilaa miciyo. Cidiyo iney ku hadheen xitaa ma’ogi. Kkkk Xayawaanku kolka uu yaryahay ama taagta daran yahay, haduu naftiisa u baqdo wuu is buufiyaa, ama wuu sare istaagaa ama bulbulbuu iska kiciyaa, bisadaa ugu yaroo tuurbey isku yeeshaa si ay isku dheereysiiso. Guux badana wey sameeyaan si looga baqdo oo ay balaayo balaayo iska dhigaan. Nimankan Farmaajo u booteynayaa woxoodu booto dhaafi meyso. Kkkkk
Ha wareegto giraantu. Waxeynu ka dhursugnaaba waa maalmo kooban. Kursigeygii weynaa aniga waa ii diyaarsan yahay. TV naqshadii ugu danbeysay ahna waan usoo iibsadey. Daawasho wacan sxb.
Suldaan sare Waan kaa qaaday mahadsanid,salaantaa Ehelnimo adiguna iga gudoon Salaan qiimo weyn ku fadhida.
Sxb qoolyaha walaweyntu baalaxoflaynta waa inay bartaan maaha sidan jilicsan ee Niic iyo calaacalka ah.
Armaajo Timo beerte waa saad sheegtay waxa u sawirmay sawir khaldan oo ah waxaa tahay wadani dadka xamar joogana way ku jecel yihiin laakiin xisaab khaldan ayuu isku dhuftay Abu Shaarub Armaajo.
Sida ii muuqata nimanka walaweyn iyaguna jiq bay ku tahay oo meel ay waxka bilaaban ma jirto oo waa too late Armaajana Cidiyaha ayuu ku dagaalamayaa oo weli filmkii wadani baa tahay oo waa lagu jecel yahay ayaa u shidan kkkkkkkk war ileyn tanoo kale.
Calaa kuli xaal waxaynu sugnaaba waa filmka oo bilaama si fiicana aynu u daawano,
Canaasiirta Munaafaqiinta wadaniyada iyo midnimada ku gabada iyo mulkiilayaasha Xamar weeye ciyaartu siidhiga waxa Afuufaya So called Beesha Caalamka iyo macalinka Armaajo Ee Abiy Ahmed Oo marba dalool yar kasoo Eegaya Armaajo kkkkkk.
Lets game started.
Ha wadhleyso Wadh Wadh.
Ma u fiirsateen say Axmed Shiine iyo jamaamu iyo yoocada iyo geelle iskumar soo galaan oo iskusi uga maqnaadaan webkaan? Saan u fahmey waa hal ruux oo isu jawaabaya oo waxaas oo magac soo kala qaata suu dadka u khaldo kkkkkk. idoor futo xume waa lagu fahmey meeshaan hal ruux baa ka tahay tuug tuug dhaley.